people Nepal » यसकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निम्तो प्रचण्ड, देउवा र ओलीद्धारा अस्विकार शाह खिन्न ! यसकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निम्तो प्रचण्ड, देउवा र ओलीद्धारा अस्विकार शाह खिन्न ! – people Nepal
यसकारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निम्तो प्रचण्ड, देउवा र ओलीद्धारा अस्विकार शाह खिन्न !
काठमाडौं, २५ चैत । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सँगै लन्च गरेको खबरले मिडियामा निकै चर्चा भयो।
पूर्वराजा शाहको नाती हृदयेन्द्रको ब्रतबन्धको अवसरमा आयोजना गरेको दिवा भोजमा सरिक हुन राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी होटल सोल्टीमा पुगेकी थिईन। भोजमा सरिक हुन पुगेका पत्रकार ऋषि धमलाका अनुसार पूर्वराजा शाह र राष्ट्रपति भण्डारीवीच करिब डेढ घण्टा भलाकुसारी समेत भएको थियो ।
पूर्वराजाले भोजको लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुदेखि, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवसमेतलाई निम्तो दिएका थिए । तर, भोजमा निम्तो दिए अनुसार शीर्ष नेताहरु कोही पनि उपस्थित् भएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोही पनि भोजमा आएनन् । पूर्वराजा शाहले सबै शीर्ष नेताहरु आउने विश्वास लिएका थिए । तर उनको उक्त विश्वास लामो समय टिकेन् ।
रमाईलो त के भने रु पूर्वराजा राष्ट्रपति भण्डारीकी छोरीको विवाहमा सरिक भएकोले आज त्यही पैंचो तिर्नपनि राष्ट्रपति भण्डारी आजको भोजमा गएको हुन सक्ने धेरैले अड्कल काटेका छन् । पूर्वराजा गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यो वीचमा उनले दलका नेताहरुसँग सम्बन्ध सूमधुर बनाउन धेरै कोशिश गरिरहेका छन् । उनले दलका नेताहरुलाई पहिलो पटक सामाजिक कार्यमा निम्तो दिएर आफू दलहरुसँग नजिक रहेको देखाउने प्रयत्न गरेका हुन् । तर उनको उक्त झुकावलाई भने दलका शीर्ष नेतृत्वले भने प्रायः बेवास्ता नै गरेको छ ।
बिहीबारको लन्च आवरमा पूर्वराजा शाहले राष्ट्रपति भण्डारीलाई चुनाव हुन्छ त भनेर प्रश्न गरेका थिए भने राष्ट्रपति भण्डारीले ‘हुन्छ होला’ भन्दै मुस्कुराउँदै जवाफ दिएको धमलाले जनाए । हृदयेन्द्रको ब्रतबन्ध केही दिन अघि सम्पन्न भएको थियो । ब्रतबन्ध पछि पाहुनाहरुका लागि भोज चाहिँ आज आयोजना गरिएको छ । साभार रिपोटर्सक्लब नेपाल बाट